Colourful Recipes – Content | Colourful Recipes
Colourful Recipes – Content
CONTENT ( မာတိကာ )
Soy Bean Paste Recipe
Fish Paste Recipe
အရသာ အသစ် အဆန်းတမျိုး … ချက်ဖြစ်သော အစားအသောက်များကို Special Menu ထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။
ချက်နည်းကို ပုံမှန် ပိုစ့်တွေထက် ပိုပီး .. ချက်နည်း အသေးစိတ် .. ကြုံတွေ့နိုင်တာတွေကို အသေးစိတ် ရေးပေးထားသော ပိုစ့်များကို cooking experience menu ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
ပါဝင်သော ပစည်းများကို ဓါတ်ပုံဖြင့် မြင်အောင် သေချာပြထားသော ပိုစ့်များ ..
၀ယ်စားသော အစားအသောက်များ ဆိုရင် Food & Drink – Menu အောက်မှာ ရှိပါမယ်။
Cooking Ingredient Price
Menu ဘား မှာ Chicken Recipe ကို Mouse ထားလိုက်ရင် Chicken နဲ့ ချက်ထားသော ဟင်း … ( အုပ်စု ) တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Price ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကြည့်ပုံ ကြည့် နည်း အဆင့်ဆင့်က –
Blog အပေါ်ဆုံး … Menu Bar မှာ –
Price ကို mouse ထားလိုက်ရင် –
Cooking Ingredients Price ကို ထပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Colourful Recipes Blog – Content ဒီ Page မှာ …. MOUSE ကို နေရာရွှေ့ပီး လက်ဖ၀ါးပုံ ပေါ်နေတဲ့ LINK ဆိုရင် သက်ဆိုင်တဲ့ COLOURFUL RECIPES BLOG WEBSITE LINK ချိတ်ဆက်ပီးပီမို့ ဖတ်လို့ရပါသည်။
Content Page မှာ … Colourful recipes ဘလော့ မာတိကာ ဖြစ်ပါသည်။
Search Engines ( Yahoo, Google , Bing, Ask, AOL ) ကနေ … Colourful Recipes ဘလော့ကို ရှာတွေ့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်။
ဒီဘလော့ကို ရောက်လာလို့ ရှိရင် … ပိုစ့်တွေ ရှာပုံ ရှာနည်းကို .. မြန်မြန်ဆန်ဆန် .. ရှာဖွေ နိုင်အောင် .. စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Price အောက်က Cooking Ingredients ပိုစ့်တွေ ဆိုရင် Smart Phone နဲ့ ဖွင့်ကြည့်ပီး – အမေရိကားမှာ ဈေးသွားဝယ်သည့်အချိန်မှာ အသုံးဝင်မှာပါ။
Price ပါ ထည့်ထားတော့ မုန့် ( သို့မဟုတ် ) ဟင်းကို စချက်ကြည့်မယ်ဆို ဘယ်လောက် ကုန်ကြမယ်ဆိုတာ အကြမ်းမျဉ်း တွက်ဆ နိုင်သလို … ကုန်ကျငွေကိုလည်း average တွက်ချက်ကြည့်နိုင်မှာပါ။
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး စိတ်လွတ်လပ်၊ ပျော်ရွှင်စွာ ဖတ်သွားနိုင်ပါစေ။
Enjoy your reading, Happy Blogging !
Respect for my time.
7 comments on “Colourful Recipes – Content”
Htar Htar Nwe
August 27, 2012 @ 7:16 am
Great thanks, sister.
You have delicious recipes.
There will be plenty of new recipes and photos.
Aye Zay Paing
September 8, 2012 @ 11:45 am
ဘလော့က အရမ်းလှတယ်။ ဟင်းတွေကလည်း ကာလာစုံပဲ။ ဘလော့ နာမည်နဲ့ လိုက်တယ်။ ဘလော့ဒီဇိုင်းလည်း ကောင်းတယ်။ blogspot ထက် wordpress က ပိုကောင်းတယ်။ အမြင်ရှင်းနေတာပဲ။
September 9, 2012 @ 12:53 am
Thank * lot!
Pingback: Colourful Recipes
February 3, 2013 @ 9:01 pm
Your recipes are amazing! I love the variety of food here and Thank you for liking my “Glamour Barbie Closet” post and following my blog. I look forward to your future recipes and following your post 🙂
February 4, 2013 @ 6:05 pm
Thanks for dropping by – comment. Again, thanks for coming around my small corner of the web.
Pingback: ပြန်စာ | Thet Nandar Family
LeaveaReply to Htar Htar Nwe Cancel reply